Sokajy:Mpihira malagasy Info. About. What's This?
ⓘ Sokajy:Mpihira malagasy
MediaWiki dia rindrankajy wiki iray manana ny lisansy GNU General Public License na GPL. Nosoratana taminny PHP ary mitaky banky angona MySQL. Tany am-boalohany dia ho ani Wikipedia, raki-pahalalana malalaka mampiasa wiki, no namoronana azy, fa ankehitriny kosa dia efa fitaovana fanta-daza sy be mpampiasa, iray aminireo ankafizinny mpampiasa wiki indrindra. Ankehitriny ohatra, dia ny tetikasa rehetra anny Wikimedia Foundation, ny wikis rehetra ao amini Wikia, ary wiki ngeza maro no mampiasa azy. Fantatra koa fa misy orinasa mampiasa azy hizarana fampahalalana anatiny na ataony CMS. Iray ho ...
Ny Matevina Toy Ny Biriky no fahadimy rakikira ny malagasy rock band tamini jetro Tull, navoaka taminny 10 Martsa ny taona 1972 ny alalan ny firaketana an-tsoratra ny orinasa "Chrysalis Firaketana an-tsoratra". Ny firaketana an-tsoratra dia ahitana fotsiny ny anaram-boninahitra hira izay manana ny faharetanny efa ho 42 minitra, ary dia mizara ho faritra roa noho ny zava-misy fa ny tany am-boalohany ny famoahana azy dia ao ny endriky ny kapila ny vinyl. Io rakikira voalohany album tamini jetro Tull, izay niakatra ho any an-tamponny ny Takelaka ao aminny United States.